Home आर्थिक हिउँचुलीसँग मालिकाको पिरती
२०७६, १० फाल्गुन शनिबार १०:३५
(अमृत भादगाउँले)एउटा यस्तो पवित्र भूमि जहाँ एकै ठाउँमा तीन बहिनी देवीको बास छ। म्याग्दीको मालिकाधुरी (३,३५० मिटर) मा मालिका, कालिका र जालिका बसेका छन्। उनीहरू हरपल गुर्जा, धौलागिरि, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालसँग आँखा जुधाउँछन्। लाग्छ सदियौंदेखि त्रिदेवी र हिउँचुलीबीच पिरती गाँसिएको छ।
तिनै मित्रको निम्तोमा म पनि मालिका पुगेको हुँ। बेनीबाट जीपमा गएर हामी साँझ विम गाउँमा बस्यौं। शेरबहादुर गुरुङ दाइको जीपमा पत्रकार धिरन खत्री र म थियौं। भोलिपल्ट बिहान हामी बसेको होटल ‘लेनिन खाजा घर’की सञ्चालक दलमति गर्बुजाले थर्मसमा चिया र झोलामा झिलिङगा तयार पारिन्। खाजा खाईवरी त्यहाँबाट हामी सडक पुगेको ठाउँसम्म जीपमै गयौं।
मालिका क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष छकप्रसाद पाइजाको अगुवाइमा हामी ८ जना थियौं। सडकमा कतैकतै बाक्लो हिउँ थियो। शेरबहादुर दाइ कुशल चालक हुन्, उनले सजिलै उकालो चढाए। जीपबाट ओर्लेर जंगलको बाटो छिचोलेर धुरीमा पुग्न ठयाक्कै तीन घन्टा लाग्यो हामीलाई। ठाउँठाउँमा हिउँ थियो, होस गरेर हिँड्यौं। नागिथलाभन्दा मास्तिर नाँगो डाँडा रहेछ।
विम गाउँभन्दा माथि वस्ती छैन। कुनै होटल तथा खाजा घर छैनन्। डाँडामा हाम्रो स्वागतमा बसेका थिए समितिका सचिव ओमकार रोका। हामीलाई अध्यक्ष छकप्रसाद र उनले मालिकाको महत्व बुभाए। घमाइलो दिन, मस्त हाँसेका हिमाल। आँखाले जति हेरे पनि नअघाइने। सके जति क्यामेराल खिचिरह्यौं फोटा।
चन्द्रागिरीमा एउटा भालेश्वर महादेव, मनकामना र कालिन्चोकमा एकएक देवीको मात्र बास छ। तर, मालिकाधुरीमा त एकै ठाउँमा मालिका, कालिका र जालिकाको आशीर्वाद पाइन्छ। त्रिदेवीको दर्शन पाइने अलौकिक गन्तव्यका रूपमा यसको प्रचार गर्न सकिन्छ।
यस्तो पावन भूमिमा पुग्ने इच्छा कसलाई नहोला र ! त्यहाँबाट फर्केपछि म भित्र उत्साहको लहर चलको छ। मालिका घुमाएकामा राजेशजीलाई धेरै धन्यवाद ! एक दिन म फेरि पुग्नेछु मालिकाधुरीमा।
कसरी पुग्ने ः काठमाडौं–बेनी २८२, बसमा १० घन्टा। बेनी–दरबाङ २३ किमि, दरबाङ–विम ७ किमि। बिमदेखि माथि ९ किमिसम्म सडक खनिएको छ। त्यहाँबाट ३ घन्टा उकालो पदयात्रामा मालिका। बेनीबाट दिउँसो १ बजे विमका लागि र विमबाट बिहान ९ बजे बेनीका लागि बस छुट्छन्, बसमा ४ घन्टा।
७३ वर्षे तन्नेरी
मालिका क्षेत्रको विकासका अगुवा हुन्–छकप्रसाद पाइजा। विसं २०५९ देखि उनको तन र मन मालिकामा केन्द्रित छ। उनकै संयोजकत्वमा विसं २०६८ मा मालिका क्षेत्र विकास समिति गठन गरियो। समितिले पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ।
उनी मालिकाको महिमागान गाएर कहिल्यै थाक्दैनन्। उनी कहिले सिंहदरबार पुगे, कहिले म्याग्दी जिविस पुगे त कहिले पर्यटन कार्यालयमा। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, मन्दिरका लागि बजेट माग गर्न पुगेका।
मालिकाको काख विम गाउँका रैथाने। खेतीपातीमै उनको जिन्दगी बित्यो। पछिल्लो कालखण्डमा मालिकातिर एकोहोरिएका हुन्। त्यसो त गाउँको खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी निर्माण र व्यवस्थापन लगायत सामाजिक काममा पनि खटिँदै आएका छन्।
आठ सन्तानका पिता उनी ७३ वर्षका भए। फुर्तिला छन्। पहिलापहिला गाउँबाट हिँडेर ४ घन्टामा मन्दिर पुग्थे। अचेल ६ घन्टा लाग्छ। मालिकाको सेवाबाट उनलाई सन्तोक मिलेको छ। शक्तिले मिलेको छ। उनी सकारात्मक सोच एवं युवा जोशका साथ काम गर्छन्। ‘मुलुकमा शान्ति छाइरहोस्’, उनी भन्छन्, ‘अब मालिकाको थप विकास गर्ने जिम्मा युवाहरूको हो।’
श्रीप्रसाद रोका,अध्यक्ष, मालिका गाउँपालिका
हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय सम्पदा मालिका नै हो। हामी पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन चेतना बढाउँदै छौं। हामी मन्दिरको बेस क्याम्पसम्म मोटर बाटो पु-याउँदै छौं। डाँडामा खानेपानीको पनि पु-याउँछौं। मालिकालाई धौलागिरी पदमार्ग र गुरिल्ला पदमार्गसँग कनेक्ट पनि गराउँदै छौं।
खरमाया बिटालु,उपाध्यक्ष, मालिका गाउँपालिका
मालिका प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक भूमि हो। अचेल मेलाका बेला मात्र भक्तजन त्यहाँ पुग्छन्। केवलकार चलाउन सके वर्षैभरि तीर्थालु पुग्ने थिए। त्यसैले तल सहस्रधाराबाट डाँडासम्म केवलकार चलाउने योजना छ। साथै मन्दिरभन्दा तल निजी क्षेत्रलाई होटल बनाउन प्रोत्साहित गर्दैछौं।
ओमकार रोका,सचिव, मालिका क्षेत्र विकास समिति
मालिका साक्षात् देवी हुन्। यिनको आशीर्वाद लाग्छ। त्यसैले देशभरका भक्तजनलाई यहाँसम्म डाक्न पाए हुन्थ्यो। मालिकामा पर्यटक बढाउन सके यसको सेरोफेरोमा बसोबास गर्ने हामी गाउँलेको आर्थिक स्थिति सुध्रिन्छ। हामी पाहुनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न हरपल तयार छौं। Source: Nagariknews.com
Previous articleविप्लव समुहको म्याग्दी जनपरिषद प्रमुख पक्राउ
Next articleटोड्केमा हनिमुन